दाजु ! अभियन्तादेखि सावधान !
नक्कली अभियन्ता ?
यो प्रश्नको अर्थ बुझन चाहनेले यति बुझनुपर्छ की यदि यस्तो गरयो भने उ अब अभियन्ता रहेनन्, तलब भत्ता र ज्याला लिएर काम गरेको व्यक्ति मात्र हुन् ।
बिहान ०७:५३ बजे
अहिले नेपालमा नक्कली अभियन्ता, असली अभियन्ताको चर्चा जोडतोडले चलेको छ । चल्नु पनि पर्छ । तर, खासमा अभियन्ता को हुन ? भनेर भावको बुझाई पनि बुझनु आवश्यक छ ।
यहाँ असली अभियन्ता भनेको विदेशमा कमाई गर्न गएका नेपालीहरु हुन, जसले आफनो पसिनाको कमाई पीडामा बाँडने गरेको छ । तर, उही पसिनाको कमाई कुनै अभियन्ता मार्फत पठाउँदा दुरुपयोग हुने गरेको कुरा अब त प्रष्ट छ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले एक–एक रकम जम्मा गरेर पीडितको लागी अभियन्ता मार्फत रकम पठाउँदा वा कुनै सहयोग पठाउँदा अभियन्ताले त्यसबाट पनि कमिशन राखेर मात्र पीडितलाई पुरयाउने गरेको तथ्य कसैबाट अब लुकेको छैन् ।
अभियन्ताको सान्दर्भिक अर्थ भन्दाखेरी आफ्नो बलबुता र आफ्नो तर्फबाट श्रम, लगानी वा रकम खर्च गरेर कसैलाई सहयोग गर्नु र त्यसवापत केही पनि फिर्ता नलिनु हुन्छ । समाजिक अभियन्ता पनि फरक छ : समाजिक अभियन्ता भनेको समाजमा परिवर्तन ल्याउनको लागि खटिने व्यक्ति मात्र हो समाजिक अभियन्ता ।
यहाँ समाजिक अभियन्ता आफैंले आफूलाई घोषणा गरी विदेशमा परिवारको लागि कमाई गर्न गएका नेपालीहरुको सेन्टिमेन्टसँग खेलवाड गर्ने गरेको उदाहरणहरु अब प्रसस्त छन् । विदेश बस्ने नेपालीहरुले पसिनाको कमाई पठाएर एक पीडितको लागि पठाउने रकम उनको घरसम्म पुरयाउनको लागि पनि बिना कमिशनको जाँदैनन् ।
दुःखद के हो भने, जसले आफ्नो छाक टारेर दुई पैसा पठाउँछन् उसको कुनै नाम हुँदैन, जसले रकम पीडितसँग पुरयाउन जान्छ उनले कम्तीमा पनि ५० वटा फोटो हालेर आफू नै सहयोग गरेको भनेर चुरीफुरी लगाएर आउँछन् । पीडित परिवारले सहयोग पुरयाउन गएकोलाई मात्र चिन्छन र उनले नै सहयोग गरेको भनेर बुझछन् ।
तर, यहाँ असली सहयोगी, असली सहयोगी मनसँग पीडितको कुनै पहुँच हुँदैन । सहयोग कस–कसले गर्यो उनलाई केही पत्तो हुँदैन, यस्तोमा काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु झैं पसिनाको कमाई दिन विदेशिएका नेपालीहरुलाई कसैले चिन्दैन, तर जो कमिशन खाएर पुरयाउन जान्छ उनलाई श्रेय जाने गर्छ । वास्तविकतामा कमिशन खाएर जाने व्यक्ति कहिल्यै पनि समाजिक अभियन्ता हुन सक्दैन ।
के सबै सामाजिक अभियन्ता गलत हुन्छन् र ? सबै हुँदैनन् तर आजभोलि केही अभियन्ताहरू चोर बिरालोजस्तै दूधका साक्षी बनेका छन् । अभियन्ता यही समाजमा फक्रेका हुनाले मौसमअनुसारको रङ बदल्न जरुर जानिसकेका छन् ।
सस्तो लोकप्रियता बटुल्नमा यिनले पीएचडी नै गरेझैँ लाग्छ । सधैँ चर्चामा रहन कहाँनेर के बोल्नुपर्छ, नारदले पनि यिनैबाट सिकेको जस्तै । कुन मुद्दा कसरी उठाउँदा अरुलाई पंगु बनाउन सकिन्छ, ठ्याक्कै मिनी नेता भन्दा फरक पर्दैन । भ्रम सिर्जना गर्न कुनै बहुरुपियाले यिनैबाट सिकून् । केही अभियन्ता यस्ता लाग्छन, नेतालाई मेसिनमा फोटोकपी गर्न लाग्दा बिग्रेका प्रति हुन् । केही मात्राका सामाजिक अभियन्ता कागजस्तै छन्, पूजा हुन्छ तर चटके छट्टु !
अरुलाई गलत सावित गर्न मात्रै केही अभियन्ताले त ठूलै समूह पनि खडा गरेका हुन्छन्, पूरै बोको हरामका गतिविधि जस्तै । सामाजिक सञ्जालमा लाइक, कमेन्ट र सेयरको भोक मेटाउन जसलाई पनि आहारा बनाउने प्राणी हुन्, कथित सामाजिक अभियन्ता ।
यिनले गलत गरे भनेर कसैले भन्नै पाइँदैन, बुरुक्क उफ्रिहाल्छन् । यिनलाई पनि उफ्रेर उचाइमा पुगिन्छ भन्ने भ्रम होला ।
उफ्रिँदैमा अग्लो ठाउँमा पुगिने भए सगरमाथामा मान्छेभन्दा पहिला भ्यागुता पुग्ने थियो । यिनले जे गरे पनि आमनागरिकले ताली बजाइदिनपुर्ने !
एक अभियन्तामा कति धैर्यता, शिष्टता र विनम्रता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी भगवान् श्रीकृष्णबाट सिक्न सक्छौँ । श्रीकृष्ण एक क्रान्तिकारी अभियन्ता थिए, गलतलाई गलत नै देख्ने र सहीलाई सही नै देख्ने ।
अभियन्ताले उठाएका हरेक मुद्दा सही नै हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । आजभोलि केही कथित् अभियन्ता केही शक्ति र गिरोहबाट पनि परिचालित छन् । यिनीहरू सही काम गर्नेहरूतिर पनि खनिने गर्छन् । ज्यादातर अभियन्ता विरोधका पर्यायजस्तै छन् । यिनले हरेक मञ्चमा तीनचौथाइ समय अरुको कित्ता काट्नमै बिताउँछन् ।
यिनले हरेक समय फलानोले केही गरेन । हरेक बोलीमा क्रीडा पोख्छन् । तर, आफूले कहिल्यै केही गर्न सकेनन् । अधिकांश अभियन्ता कहीँ न कहीँबाट परिचालित दूतजस्ता ।
कथित् अभियन्ता बाँझो जमिनजस्तै हुन् । यिनले न केही रोप्छन्, न त अरुलाई नै रोप्न दिन्छन् । केही गरी कुनै दिन रोपिहाले भने यिनले जरुर धतुरो रोप्नेछन् ।
अभियन्ता गलत निस्कियो, स्वार्थले गाँजियो, प्रायोजित हुन थाल्यो भने त्यो विज्ञापनजस्तै बन्छ । जसले आफू र आफ्ना विचार बिकाउनमा लगानी गर्दछ र विज्ञापनमा रमाउन चाहने मान्छे सस्तो लोकप्रियता चाहने खालको हुन्छ । जसको आयु स्वयम् व्यक्तिका गतिविधिले निर्धारण गरिदिन्छ ।
’धमिलो पानीमा माछा मार्न पोख्त’ मानिस पनि अहिले सामाजिक अभियन्ताका रूपमा सलबलाइरहेका छन् । सेवा गर्नु, सामाजिक कार्यमा संलग्न रहनु पुण्यको काम हो । तर, राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न अभियन्ता बन्नु वाञ्छनीय ठहरिँदैन । अभियन्ता बनेर अर्थोपार्जन गर्न खोज्नु, विभिन्न समूह वर्गबीच क्लेश पैदा गराउनु, स्वार्थगत समूहका गलत मुद्दालाई उठान गर्नु, गलत प्रवृत्तिलाई मलजल गर्नु, नागरिकलाई विभाजन गराउनु, गलत आदर्शलाई समाजमा स्थापित गराउनतिर लाग्नु यी सबै अभियानका नाममा बदमासी हुन् ।
अहिले आफूलाई समाजिक अभियन्ता भनेर लाखौंको गाडी चढने आँट उनले आफूले कमाएर होईन, विदेश बस्ने नेपालीहरुले पीडितको लागि पठाएको सहयोगबाट चोरेको रकमबाट किनेको हो । पीडितको सेन्टिमेन्ट बनाएर रकम असुल्ने एक भ्रष्ट व्यक्ति कहिले पनि अभियन्ता हुन सक्दैन् ।
कहिले नामो निशान पनि नरहेको आफूलाई समाजिक अभियन्ता भनाउने ज्वाला सँग्रौला, सरोज राय (यादव), ज्ञानेन्द्र शाही, पुन्य गौत्तम जस्ताले विदेश बस्ने नेपालीहरुको कमाईबाट मोज गरेको भन्दा खिन्न लाग्दैन ।
केहीदिन अघि विभिन्न सँचारमाध्यममा आएको समाचारको आधार मान्ने हो भन्ने आफूलाई अभियन्ता मान्ने ज्ञानेन्द्र शाही, पुन्य गौत्तम, ज्वाला सँग्रौला लगायतले ओहोदा भन्दा अधिक सम्पति जोडेका छन् । यीनीहरुको कमाईको मुख्य श्रोत के ? आम्दानीको मुख्य श्रोत के ? लाखौंको गाडी चढने हैसियत कहाँबाट आयो ? गाडी कहाँबाट लियो ? भनेर प्रश्नहरु समाजिक सँजालमा अधिक तेर्साइएको पाईन्छ ।
विदेश बस्ने नेपालीहरुले पठाएको रकमबाट कमिशन खाँदै सम्पति जोडेका यी व्यक्तिहरु असलमा कुनै अभियन्ता होईनन्, यीनीहरुका कुनै राजनीतिक पार्टीको एक साधारण कार्यकर्ता मात्र पनि हुन् ।
आफूलाई आफैंले समाजिक अभियन्ता दाबी गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि लाखौंको गाडी कहाँबाट किनेको आरोप, ज्वाला सँग्रौलामाथि सम्पति कहाँबाट आएको आरोप, पुन्य गौत्तममाथि कमाई कहाँबाट आएको आरोप, सरोज राय (यादव) माथि उमेश बचाउ अभियानको रकम झवाम्म पारेको आरोप अहिले पनि ज्वलन्त छ ।
अब, विदेश बस्ने नेपालीहरुले यीनीहरुको असलीयत बुझिसकेको छ । सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र बोल्ने र नक्कली सपोर्टर बनाउने गिरोहरुका पर्दाफास भएको छ । ज्वाला सँग्रौलाको काण्डपछि यीनीहरुको असलीयत पनि बाहिर आएकै हो र अन्धभक्तहरु पनि अब विस्तारै बुझन थालेका छन् । केही अन्धभक्तहरु अझै पनि जसले उनीहरुलाई भगवान नै मान्छन्, असलमा उनीहरु पनि भित्रदेखि सपोर्टर नभएर बलपूर्वक बनाएको सपोर्टर मात्र हुन् ।
यसले यति गरिदिए यतिको खाईदियो भने के भयो त ?– यो प्रश्नको अर्थ बुझन चाहनेले यति बुझनुपर्छ की यदि यस्तो गरयो भने उ अब अभियन्ता रहेनन्, तलब भत्ता र ज्याला लिएर काम गरेको व्यक्ति मात्र हुन् । यो व्यवहारिक रुपमा मात्र सान्दिर्भक हुन्छ । व्यवहारमा ठिक हुन्छ तर, असल अर्थमा अभियन्ताले बिना कुनै लोभलालचको कार्य गर्नुपर्दछ ।
त्यसैले, दाजु ! हो, अब यस्ता अभियन्तादेखि सावधान रहनुहोला । पीडितलाई सहयोग गर्न मन लागे सीधा आफ्नो मान्छे पठाएर, समूह बनाएर मदत गर्नुहोला, तर यस्ता नक्कली अभियन्तादेखि सावधान रहनुहोला ।
पूर्व राज्यमन्त्री मण्डलद्धारा सरकारी समानको बरबुझारथ भइसकेको छः मन्त्रालय
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ का पूर्व उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश मण्डल पदच्युत हुने वित्तिकै सबै समानको बरबुझारथ गरिदिएको जनाएको छ । न्यूज ब्यूरोमा बुधबार विहान
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ का पूर्व उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश मण्डल पदच्युत हुने वित्तिकै सबै समानको बरबुझारथ गरिदिएको जनाएको छ ।
न्यूज ब्यूरोमा बुधबार विहान प्रकाशित भएको शिर्षकको समाचारप्रति ध्यानकर्षण गर्दै मन्त्रालयले पदबाट हटने वित्तिकै एक साताभित्रै सबै समान फिर्ता गरिदिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार खण्डन पत्र पठाउँदै समाचारलाई खण्डन गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बेचन कुमार महतो र स्टोर किपर राम बल्लभ मिश्राद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा पूर्व राज्यमन्त्री मण्डलले सबै सरकारी समानको बरबुझारथ गरेको उल्लेख छ ।
यद्यपी, पत्रमा चलानी नम्बर भने उल्लेख गरिएको छैनन् । सूचना अधिकारी महतो मण्डलले सबै समाग्री फिर्ता गरेको बताएका छन् ।
यता, पूर्व राज्यमन्त्री मण्डलले समेत आफू सबै समानको बरबुथारत पदबाट हटैकै दिन गरिदिएको बताएका छन् ।
मधेशको 'गब्बर सिँह'
मधेसका 'ब्लैकमेलर–समाजसेवी' हरु